Dharaarihii Tilmaannaa Q-41-aad | Awdal State News Network
Home » ANALYSIS & EVENTS » Dharaarihii Tilmaannaa Q-41-aad
Dharaarihii Tilmaannaa Q-41-aad
Sharlaga-naadi-Boramacity.com-Aw Muxumed Xassan AUN waxa uu na siiyey furihii hoolka weyn ee huteelka Harowo oo ku yaalla baramaha magaalada Borama dabadeed waxa aan u guntaney in aan hoolkii ka shaqeyno qurxintiisii iyo qalabeyntiisii sidaas darteed nin ay walaalo ahaayeen gabyaagii weynaa ee la odhan jirey Nuur Bucul oo magiciisa la yidhaahdo Cabdillaahi Good ayaa noogu deeqay lacag badan.
Cabdillaahi Good waxa uu ahaa nin la shaqeyn jirey amma aad u kala wadday hawsha ururkii haweenka Qaranka ee Soomaaliya gaar ahaan dhinaca dejinta iyo fulinta hawlaha mashaariicda waxaana uu wakhtigaas dalka Jabuuti ka soo qaatay oo halkaas loogu soo shubay mashruuc weyn oo markaas lacagtiisu qadar ahaan dhanneyd toddoba iyo toban kun oo dollar ($17.000). Taas oo markii uu soo qaatay uu ka soo iibsadey gaadhi fiican.
Ninkaas Cabdillaahi Good markii aan ku kulaney magaalada Borama waxa aan u sheegnay fekerkii aan wadney oo markaas u baahnaa maalgelin iyo dhaqaale aan ku dhaqaajino shaqada cusub ee aan billowgeeda ka badheedhnay iyadda oo wakhtiga lagu jirey uu ahaa mid adag, nasiib wannaag arrintii aan wadney markii aan u soo bandhigey wuu la dhacay kana mabsuuday waxaana uu nagu yidhi “Hawl wannaagsan baad shaqaddeeda billowdeen aniguna waxa aan idinku taageerayaa oo aan idin siinnayaa saddex boqol oo kun oo shillin Soomaali ah”.
Runtii waxa ay ahayd lacag aad u buuran marka loo eeggo wakhtigaas aan ku jirney ee sooyaal ahaan ku taariikheysan 1991-kii dabadeed saddexdii boqol ee kun waxa aan ku caddeynay gudaha iyo guudka sare ee hoolkii aan furihiisa soo qaadaney sida nuuradii iyo ranjigii ayaan mariney waxaannan ku xidhney daaqado iyo albaabo cusub, halkaas marka aan mareyno ayaa haddana u holannay in aan billowno qalabeyntii gudaha hoolka Harowo.
Maxamed Xassan Mataan AUN ayaa isaguna noogu deeqay oo halkii aan joogney noogu keenay Teeb iyo waraaqo badan oo aan ku garaacno xogta iyo dallabka mashaariicda NGO-gga iyo weliba sideetan kun oo lacag ah gaar ahaan shillin Soomaali. Kabadh yar oo waraaqaha aan dhex dhignana waxa na siiyey nin la yidhaahdo Mahdi Ibraahim Xaaji Khayre AUN. Miis iyo dhowr kursina waxa aan ka soo iibinney sideetankii kun ee uu na siiyey Maxamed Xassan Mataan AUN oo ahaa nin deeqsiya.
Ururka waxa aan markaas u sammeynay astaan gaar ah oo uu yeellanayo. Taas oo aan ku sawriney darbiga iyo wajahada hore ee huteelka Harowo dabadeed waxa hoolkii xafiiska aan ka dhiganey dushiisa sare ka taagney calan muuq dheer oo qof kastiba daallacan karo marka uu u soo dhaadhaco bartamaha suuqa magaalada Borama.
Markaa qoladda GUUS NGO ee uu hoggaaminayey Maxamed Barkhad Miigane weli wax mashaariica oo ay billaabeen ma jirin magac ahaan se way jireen oo waxa ay isku diyaarinnayeen fulinta qorshayaashii ay dejiyeen, sidaas oo ay tahay haddana dareen baa dadkii magaalada Borama gallay oo waxa soo kordhay wax cusub oo aannay hore u aqoonnin kaas oo ku soo biiray saaxada hanaqaadka iyo horumarka nolosha ummadda reer Awdal.
Nin la yidhaahdo Maxamed Muuse Bahdoon AUN oo markii dambena magaalada Borama ka noqdey mayor ayaan u yeedhnay oo ahaa mid ka mid ah dadkii ugu xeesha dharaa xirfada amma garaacida aallada Teebka guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan dabadeed waxa aan Maxamed Muuse AUN ku nidhi “Waar adiguna waad nagula jirtaa yagleelka haya’ddan cusub ee mashaariicdaas aan qoreyno waa in aan ku garaacdo Teebka”. Haye iyo hawraar san baan kala guddooney.
Xasuus ahaan waxa aannan iloobin karin dhaqan midhkaan u lahayn intii aan ku jirney billowga hawshaas cusub ee SOSVO NGO oo waxa caaddo u ahayd intayadii fekradan ugubka ah wadney in aan gallab kaste fadhiisano oo aan ku qaylno barxada hore ee hoolka dabadeedna aan halkaas isku waydaarsano afkaar iyo aaraa ku sahabsan NGO-gga isla markaana waxa aan u aragno xal kama dambeys ah ayaan qori jirney kadibna waxa aan ku tuurnaa Maxamed Muuse Bahdoon AUN si uu markaas u garaaco.
Berigaas waxa maalin welba magaalada Borama..